अचानक एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमार किन नेपाल आउँदै छिन् ? « News24 : Premium News Channel
अचानक एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमार किन नेपाल आउँदै छिन् ?
काठमाडौं । सम्झौताबमोजिम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोगार्थ रकम कार्यान्वयन नभए पछि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउन लागेकी छन् । उनी अर्को साता नेपाल आउने तयारीमा छन् ।
एमसीसीको विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेकी उनी एमसीसी उपाध्यक्ष नियुक्त भएसँगै नेपाल आउन आतुर रहेको बताइन्छ । चासोको विषय त के छ भने चार वर्षअघि नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौतामा अमेरिकाको तर्फबाट उनले नै प्रतिनिधित्व जनाएकी थिइन् ।
तर, नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयसँग अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गरेको ४ वर्ष वितिसक्दा पनि ठोस निर्णय भइसकेको छैन । र, आफ्नै कार्यकालमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उनी नेपाल भ्रमणको तयारीमा छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता संसदबाट टेबल गर्न भने पनि छलफल भएन । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले यस विषय खरो अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
उनले नेपालमा एमसीसी आए सैनिकको परेड खेल्ने ठाउँ हुने र अमेरिकाको इशारामा चल्नुपर्ने भन्दै उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । त्यसो त अहिले एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा सडकदेखि सदनसम्म विरोध प्रदर्शन भइरहेका पनि छन्् । सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत थुप्रै दल एमसीसीको विरुद्धमा छन् ।
उनीहरु सम्झौता संशोधन गरेरमात्र एमसीसी पास गर्न सकिने नत्र पास नहुने भनेर भनिरहेका छन् । तर, देउवा नेतृत्वकै पालामा सम्झौता भएको एमसीसी अहिले घुम्दै फिर्दै देउवा नेतृत्वकै सरकारमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी संस्था एमसीसीको सहयोगार्थ रकम संसदबाट पास गर्न पाइला छिटछिटो चालेका छन् । उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउन लागेकैले हुन सक्छ प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो रफ्तार बढाएको । र, अहिले उनी एमसीसी पास गर्न विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुम मिलाउन अघि बढेका छन् ।
तर, एउटै डुंगामा सयर सत्तासाझेदारी दलहरु एमसीसीबारे अहिले त्यत्ति धेरै चासो दिएको देखिँदैन । केही विज्ञहरुले यहीँ एमसीसीकै कारणले सरकारमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने पनि बताउँछन् ।
एमसीसी नआउँदै २० करोड ८३ लाख खर्च ! (प्रतिवेदनसहित)
र, यहीँबेला एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउन लागेकी छन् । उनी कति दिन नेपालमा बस्ने भन्नेबारे केही सूचना प्राप्त नभए पनि नेपालमा बस्दा उनले एमसीसी कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपका (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अन्य सांसदहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ।
लामो समयसम्म एमसीसीको विभिन्न निकायको भूमिका निर्वाह गरेकी सुमार उपाध्यक्षमा नियुक्त भएसँगै उनको नजर नेपालमा परेको छ । उनी नेपाल आएर जतिसक्दो चाँडो उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न आतुर छिन् ।
यसअघि नेपाल–अमेरिकाबीच एमसिसीको सहयोगार्थ रकम सम्झौता गर्न भनि आयोजित सम्झौतामा उनी नै सहभागी थिइन् । र, उनले नेपाललाई राम्रोसँग नियालेकी छन् ।
२०१७ अप्रिल ५ मा दुई देशका प्रतिनिधिबीच एमसिसीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट सुमारले हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।
सम्झौताअन्तर्गत नेपालले बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने भनिएको छ। त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न नपाउने सम्झौता भएको छ । तर, सम्झौता कार्यान्व्यनमा आइनसक्दै २० करोड ८३ लाख खर्च भइसकेको महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।